११ दिनदेखि कल्पना वि.क बेपत्ता , खोजिदिन परिवारको आग्रह – Taja Khawar
११ दिनदेखि कल्पना वि.क बेपत्ता , खोजिदिन परिवारको आग्रह
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०३, २०७८ समय: १:०९:०५
जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा न. ५ बालकुमारी घर भएकि २१ बर्षीय कल्पना बि.क. बिगत ११ दिन देखि बेपत्ता भएकि छिन ।
काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा न.२ मा बिगत २ बर्षदेखि बस्दै आएकि उनी असार २३ गतेबाट हराइरहेको हुँदा खोजीको लागि परिवारले सबैमा आग्रह गरेको छ । उनका श्रीमान रामकुमार बि.क.का अनुसार उनी असार २३ गते करिव २ बजे घरबाट बजार जान भनेर बाहिर निस्केको र त्यसपछि उनी सम्पर्कबिहिन भएको बताएका छन् ।
कहिँ कतै गएको भए आउने आशामा परिवारले एक दिन हेरेको भएपनि उनी घर नआएपछि परिवारले प्रहरीमा खोजि कार्यको लागि निबेदन दिएको थियो । बुढानिलकण्ठ प्रहरी कार्यालयमा असार २४ गते हराएको हुँदा खोजि गरिदिन निबेदन दिएको थियो ।
उनका श्रीमान दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आइरहेका छन् भने उनी घरमा नै बस्ने गर्दथीइन। उनीहरुको बिबाह भएको सात बर्ष भएको र काठमाडौँमा बिगत २ बर्षदेखि २ जना मात्रै बस्दै आइरहेको उनका श्रीमान रामकुमारले बताए ।
उनले आफ्नो मोबाइल न. ९८६५३३३०७६ वा कल्पनाका पिता राम बहादुर सुनारको ९८१३५६१५९५ मा सम्पर्क गरेर जानकारी दिई सहयोग गरिदिन सबैमा आग्रह गरेको छ । नातेदार,आफन्त,चिनजान भएका सबै ठाउँमा सम्पर्क गर्दा समेत उनी फेला नपरेपछि परिवारले प्रहरीमा निबेदन दिएको थियो ।
Last Updated on: July 18th, 2021 at 1:09 am